DAAWO: Axmed Biif oo isagoo ilmaynaya umadda Soomaaliyeed u sheegay arrin kusoo korortay! | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada DAAWO: Axmed Biif oo isagoo ilmaynaya umadda Soomaaliyeed u sheegay arrin kusoo...
DAAWO: Axmed Biif oo isagoo ilmaynaya umadda Soomaaliyeed u sheegay arrin kusoo korortay!
(Maka) 10 Juun 2018 – Fannaankii hore ee Axmed Biif oo ku sugan Xaramka oo uu Cumro u joogo ayaa dadwaynaha markale ugu celiyay inuu gebi ahaanba faraha ka qaaday fankii iyo heesihii.
Biif ayaa isagoo dhex taagan kacbada dhex taagan dadwaynaha ka codsaday inay tirtiraan dhamaanba heesihiisa iyo wixii la xiriira isagoo ilmeeynaya Ilaahay uga mahad naqay hidaayadda uu siiyay, isagoo sheegay inuu markii 2-aad muddo sanad gudihii ah Xajka yimi.
Halkan hoose ka daawo muuqaalka….
Previous articleWEJIGIIN GUBAY!: Juxaa oo siyaasiyiin ka kala tirsan Somaliland & Puntland ku dhaliilay inay ‘af-xumo’ ku baratamayaan, amaanna u jeediyay….!
Next articleXANTA SUUQA & XIDIGAHA LA RABO: Wararkii ugu dambeeyay suuqa kala iibsiga iyo wargaysyada!